Chinese Xiaomi Dethrones Apple dị ka onye na-eme Smartphone nke abụọ kachasị ukwuu n’ụwa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Technology » Chinese Xiaomi Dethrones Apple dị ka onye na-eme Smartphone nke abụọ kachasị ukwuu n’ụwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • News • Ịzụ ahịa • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Chinese Xiaomi dethrones Apple dị ka onye na-eme ekwentị nke abụọ kasị ukwuu n'ụwa
Mbupu Xiaomi ejirila 300% na Latin America na 50% na Western Europe, ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga.
Xiaomi na-eto eto ahia nke mba ofesi ngwa ngwa.
Ihe ịga nke ọma Xiaomi sitere na ịrị elu 83% na-adịbeghị anya na mbupụ ekwentị nke ụlọ ọrụ.
E jiri ya tụnyere Samsung na Apple, ọnụahịa Xiaomi na-ere ihe dị ka 40% na 75% dị ọnụ ala karịa n'otu n'otu.
Xlọ ọrụ Xiaomi nke China rutere 17% òkè na mbupu ekwentị zuru ụwa ọnụ na nkeji nke abụọ nke 2021, n'azụ Samsung na 19%, wee bụrụ mba nke abụọ kachasị ama n'ụwa, na-eti onye iro US aka Apple Inc site na 3% na mbupu ụwa. Apple bịara nke atọ, yana òkè nke 14% nke ahịa.
"Xiaomi na-eto eto azụmahịa ya na mba ofesi n'ike n'ike, ”ka ụlọ ọrụ na-eme nchọpụta Canalys kwuru na nkwupụta mgbasa ozi, na-arịba ngwa ahịa Xiaomi rịrị elu 300% na Latin America na 50% na Western Europe, ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga.
Nkwupụta Canalys mere ka mbubata ụlọ ọrụ China dị 4.1% dị elu na azụmaahịa Fraịde. Ihe ịga nke ọma Xiaomi sitere na nso nso a nke 83% na mbupụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, megide mmụba 15% maka Samsung na naanị 1% gbagoro maka Apple.
Na ntinye ya n'ime ahia ama ama ama, onye na - emeputa ihe niile site na ndị na - ehicha ihe na igwe elektrọnik kọmpụta kọmpụta abụọ flagship ruo afọ a, ya na Mi 11 Ultra na-enye otu n'ime igwefoto igwefoto kachasị ukwuu etinyere na ama. Agbanyeghị, ọnụahịa ire ere nke Xiaomi smartphones na-adị ala ma e jiri ya tụnyere Samsung na Apple, nke na-eme ka ha nwekwuo mmasị maka ndị na-azụ ahịa.
“Tụnyere Samsung na Apple, [Xiaomi] nkezi ere price bụ na 40% na 75% dị ọnụ ala karịa karị. Ya mere, ihe kachasị mkpa maka Xiaomi afọ a bụ ịzụlite ahịa nke ngwaọrụ ya dị elu, dị ka Mi 11 Ultra. Mana ọ ga-abụ ọgụ siri ike, ”ka akụkọ ahụ kwubiri.
E wezụga smartphones, Xiaomi na-anwalekwa ahịa ndị ọzọ. Na mbido afọ a ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya n'ịzụ ahịa ụgbọ ala eletriki, wee kpughee atụmatụ itinye ihe dị ka ijeri $ 10 na teknụzụ n'ime afọ iri na-abịanụ.